Websaydhka cusub ee tiknoolajiyada Wally machinery ayaa la furay
Waxaa si rasmi ah loo furay websaydhka Dongguan Walley Makiinado Teknolojiyadeed Co., Ltd. Waad ku mahadsantahay dareenkaaga ku aaddan horumarka Wally. Si si fiican kuugu adeegto, Wally websaydh ayaa dib loo eegay oo la casriyeeyay, iyo khaanadda xarunta wararka ee websaydhka ayaa loo isticmaali doonaa in lagu cusbooneysiiyo Walley & ...
Volley tiknoolajiyada farsamada farsamada gacanta R & D
Xarunta imtixaanka saxda ah ee mudada dheer la sugaayay ayaa ugu danbeyntii la dhisay. Aasaasida xarunta tijaabada saxda ah waxay siisay taageero tijaabo adag waaxda tayada waaxda wax soo saarka. In warshadaha machining sax CNC, imtixaanka sax waa supp a lagama maarmaanka ah ...
Xarunta tijaabada saxda ah ee Wolley ee farsamada farsamada ayaa la aasaasay
Tiknoolajiyada makiinada Wally waxay si guul leh u dhaaftay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee TS16949
Waxaan si diirran ugu dabaaldegeynaa in tikniyoolajiyadda mashiinnada Waley ay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada iso / ts16949. Lso / ts 16949 waa ISO9001, QS 9000 (US), avsq (Talyaani), eaqf (Faransiis), iyo VDA6.1 (Jarmal) waa shuruudaha nidaamka tayada guud ee warshadaha baabuurta. Marka la soo koobo, waa qua ...
Tiknoolajiyada makiinadaha Wally waxay si guul leh u dhaaftay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ISO9001
Bishii Ogosto 26, 2009, Dongguan Waley tiknoolajiyada mashiinka ayaa keentay shahaadada nidaamka tayada ISO9001. Waxay qaadatay hal sano laga bilaabo howlgalka nidaamka maaraynta ISO9001 ilaa dhameystirka shahaadada. Ka dib bilowgii maaraynta tayada ISO9001, waaxaha oo dhan waxay ururiyeen ...
Teknolojiyada makiinada Wally 2020 Qoyska maalinta sanadka cusub waxay isu yimaadaan si ay ugu dabaaldegaan sanadka cusub
Bishii Diseembar 31, 2019, tiknoolajiyada mashiinnada Wally waxay soo gashay Sannadka Cusub ee Sannadlaha ah, iyo xafladda Maalinta Sannadka cusub ayaa timid sidii loogu talagalay. Waaxda maamulka ayaa qorsheysay oo abaabushay xaflad casho ah oo loogu talagalay xafladda Maalinta sanadka cusub. Dhammaan qoyskii Wally ayaa isugu soo ururay inay sameeyaan ...